Xildhibaan C/wahaab Ugaas Khaliif oo Dacwad ka dhan ah loo gudbinayo Maxkamad kutaala Sweden | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhibaan C/wahaab Ugaas Khaliif oo Dacwad ka dhan ah loo gudbinayo Maxkamad kutaala Sweden
Xubno ka tirsan jaaliyadda ka soo jeeda maamul goboleedka koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku nool Sweden ayaa diyaarinaya dacwad ka dhan ah C/wahaab Ugaas Khaliif oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kahorna degenaa dalkan Sweden gaar ahaan magaaladda Malmö.
Dacwadan loo gudbinayo maxkamad ku taal magaalada Malmö ayaa ku eedeyneysa C/wahaab Ugaas hurinta colaad beeleed uu ka hurinayo gobalka Bakool ee hoos taga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana hadii taas lagu helo dhici karta in looga yeero maxkamada Malmö, taasoo qaadi karta talaabooyin ka dhan ah degenaanshihiisa dalka Sweden.
C/wahaab Khaliif ayaa inta aanu ku biirin siyaasada Soomaaliya xiligii dowladii Sheekh Shariif waxaa ka mid ahaa xisbiga social demokrats ee degmo ku taala koonfurta Malmö.
Dacwadan ayaa ah tiii ugu horeysay ee laga gudbiyo dadka dibadaha ka tagay ee dagaalada ka hurinaya gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo lagu eedeeyo inay caruurtooda uga soo tagteen dal nabdoon isla markaana marka ay colaadu qaraxdo ay ka soo cararaan dalka oo ay ku soo laabtaan dalalkii reer galbeedka ee marki hore ay ka yimaadeen.
One thought on “Xildhibaan C/wahaab Ugaas Khaliif oo Dacwad ka dhan ah loo gudbinayo Maxkamad kutaala Sweden”
Runtii wa wax lgu qoslo mar aad leedihiin dacwo degenanshihisa wax u dhimi karto war ninku waa swedish sharcigisa wuu la dhiman uun mise somalidu sharciyada ma akhrso. Tan kale wa nin siyasi ah oo degaankisa maamul u samaystay taas ma colaad hurin ba wa suaale. Nidaam samaysigana wa wax waafqsan maamul wanaaga sweden ee in lagu daydo mudan